Tag: dib u habeyn | Martech Zone
Waa Maxay Bogga 404 Khalad? Maxay Muhiim U Yihiin?
Arbacada, Maarso 24, 2021 Khamiis, Maarso 25, 2021 Douglas Karr
Markaad codsi u dirto cinwaan biraawsarka, dhacdooyin taxane ah ayaa ka dhaca arrin ku saabsan microseconds: Waxaad ku qortaa cinwaan cinwaan ah http ama https oo waxaad garaacdaa gala. Http wuxuu u taagan yahay borotokoolka wareejinta hypertext waxaana loo maraa server magac domain ah. Https waa isku xir aamin ah halkaasoo martigeliyaha iyo barowsarku ay isgacan qaadaan oo ay u diraan xog la qariyey Server-ka magaca domainku wuxuu eegaa halka uu domainku tilmaamayo
Sida Loo Kordhiyo Darajaynta Raadinta Adoo Raadinaya, Kormeeraya, iyo Toosinta 404 Khaladaad ee WordPress
Arbacada, February 24, 2021 Talaado, Agoosto 24, 2021 Douglas Karr
Waxaan ka caawinaynaa macmiil shirkadeed hada hirgalinta degel cusub oo WordPress ah. Iyagu waa goobo badan, ganacsi luqado badan leh waxayna leeyihiin natiijooyin liita oo la xiriira raadinta sannadihii la soo dhaafay. Markii aan qorsheyneynay boggooda cusub, waxaan ogaanay dhowr arrimood: Archives - waxay lahaayeen dhowr goobood tobankii sano ee la soo dhaafay oo leh farqi muuqda oo ku saabsan qaab dhismeedka URL-ka boggooda. Markii aan tijaabinay xiriiriyeyaasha hore ee bogga, waxay ahaayeen 404'd bogooda ugu dambeeyay.
Khamiis, Agoosto 13, 2020 Khamiis, Agoosto 13, 2020 Douglas Karr
Raadinta waxqabadka isku xirka badiyaa, nasiib daro, dib-u-fikir markii shirkaduhu horumariyaan ololeyaal, kormeerida xiriirinta xiriirinta xiriirka, ama cabbiraadda beddelaadyada. Anshax la'aanta xagga horumarinta iyo la socoshada xiriiriyeyaasha ayaa sababi kara arrimo badan oo xagga hoose ah taasoo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn in lagu cabbiro waxqabadka dhexdhexaadinta iyo kanaalada. ClickMeter waa barxad udub dhexaad ah oo leh API laxiriira taas oo u saamaxaysa shirkadaha, wakaaladaha, xayeysiiyaasha, iyo daabacayaasha in ay dhisaan habab ku saabsan fulinta iyo cabirida isku xirkooda qiimaha.
La cusbooneysiin karo: Cusbooneysii CMS, Platform Ecommerce ama Website Weyn
Khamiis, Juun 6, 2017 Khamiis, Juun 6, 2017 Douglas Karr
Buug-yaraha ka jawaabaya iyo goobaha ganacsi ee e-commerce ee leh macluumaadka ugu dambeeyay waa ka muhiimsan yihiin sidii hore. Awoodda lagu cusboonaysiin karo bartaadu kuma koobna oo keliya isbeddellada ku jira, sidoo kale waa in la sii wado hagaajinta bogagga raadinta, moobiilka, iyo beddelaadyada Waqtigan iyo da'da, waa wax laga naxo in ku dhawaad ​​kala badh suuqleyda ay tahay inay la xiriiraan waaxdooda IT-da si ay isbedel aasaasi ah ugu sameeyaan websaydhkooda toddobaadle - laakiin waa run. Ayima ayaa ku dhawaaqday